သွေးခုန်နှုန်းသော induction သတ္တု detector (MS-6350) China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Radar ရွှေ Detector မထိုးဖောက်မြေပြင်,ရွှေ Hunter detectors,ရတနာအမဲလိုက်ဘို့ရွှေကို၎င်း Scanner
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြေအောက်သတ္တု Detector > မြေအောက်ရွှေ Detector > သွေးခုန်နှုန်းသော induction သတ္တု detector (MS-6350)
သွေးခုန်နှုန်းသော induction သတ္တု detector (MS-6350)
အဆိုပါ MD-6350 သီးသန့်ပစ်မှတ် ID ကိုနည်းပညာနှင့်မူပိုင်ခွင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု features တွေပါဝင်သည်။ ဒီနည်းပညာကိုသင် detector`s ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆက်တင် (အောက်ပိုင်းစကေး) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိပစ်မှတ် (အထက်စကေး) ၏ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုနှစ်ခုညွှန်ပြချက်အကြေးခွံပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ MD-6350 ကိုလည်း Enhanced သံဆုံးဖြတ်ချက် (ရှုပ်ပွနေအောင်ဒေသများရှိသံ junk ကနေနှစ်လိုဖွယ်ပစ်မှတ်ခွဲထုတ်ဘို့အပိုဆောင်း resolution ကို) တပ်ဆင်ထားနှင့်တစ်ဦးစံ 8.5 ကပိုစိန်ခေါ်မှု mineral မြေဆီလွှာထဲတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်ဂျင်နီယာဘဲဥပုံကို Double-D ကိုရှာဖွေရေးကွိုင် "11 ×" ။ သွေးခုန်နှုန်းသော induction သတ္တု detector, ရွှေသတ္တု detectors အ, ရွှေသတ္တု detector, တရုတ်ဖန်ဆင်းရွှေသတ္တု detector ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ MD-6350 သတ္တု detector စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယင်း၏မျိုးအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကြုံတွေ့နေကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အစပြုသူကဒီစက်ကိုသင့်ရဲ့ဖော်ထုတ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးများအတွက်ကောင်းစွာသင့်လျော်သည်။ တစ်ခုတည်းခလုတ်ကိုများ၏ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါ် One-Touch ကိုစစ်ဆင်ရေးသည် MD-6350 အင်အားကြီးနှင့်အတူမြေပြင်သတ္တုဓာတ်များအတွက်လွယ်ကူစွာညှိများနှင့်ချက်ချင်းရှာဖွေစတင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏ရေစိုခံရှာဖွေရေးကွိုင်သငျသညျရေ၌သတ္တုရှာဖွေကြကုန်အံ့နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျအရောင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းပေးထားပါတယ်။ မြေပြင်ထိုးဖောက်ရေဒါကိုရွှေ detector
မြေအောက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသတ္တုတ္ထုဖော်ထုတ်မယ်။ ကျယ်ပြန့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်, ပစ္စည်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေး .. ကိုရွှေမုဆိုး detectors အ, Long က Range သတ္တု Detector, နက်ရှိုင်းသောမြေပြင်သတ္တု detector, ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသတ္တု detector အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပစ်မှတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာညွှန်ပြရန်ပစ်မှတ် ID ကို cursor နှင့် တွဲဖက်. 2. ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအ-အလုပ်လုပ်။ ferrous (သံ) ပစ်မှတ်ပါးလွှာသောလက်ဝဲတဝက်, Non-ferrous ပစ်မှတ်အပေါ်ညွှန်ပြသို့မဟုတ်အနိမ့်စီးကူးအလယ်၌ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်, ထူထပ်သောသို့မဟုတ်မြင့်မားသောစီးကူးပစ်မှတ်ညာဖက်မှာညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်ရပါလိမ့်မယ်။
3. ပစ်မှတ် ID ကို cursor (အထက်စကေး) ရတာဟာပစ်မှတ် ID ကို cursor သည်ပစ်မှတ် ID ကိုဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများနှင့် တွဲဖက်. တစ်ဦးရှာဖွေတွေ့ရှိပစ်မှတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာဖော်ပြသည်။ အထက်စကေးပစ်မှတ် ID အတှကျတဆယ်နှစ်လုံးကို (12) ဂရပ်ဖစ် segments များပါဝင်ပါသည်။ ဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်အဘို့ရွှေကင်နာ
အဆိုပါအကြွေစေ့၏အတိမ်အနက်ကို, သို့မဟုတ်အလားတူအရွယ်ပစ်မှတ် Indicator- 5. အကြွေစေ့အနက်,2လက်မနှစ်တိုးများတွင်ညွှန်ပြနေသည်။ အများဆုံးတိကျစာဖတ်ခြင်းရဖို့မြေဆီရှာဖွေရေးကွိုင် 1 လက်မနှင့်အတူပစ်မှတ်ကိုကျော်သွားပါပြီ။ garrett ကိုရွှေ detector
7. ထိခိုက်လွယ်မှုအညွှန်းကိန်း-အဆိုပါ MD-6350 sensitivity ကိုများအတွက်ရှစ် (8) setting များကိုရှိပါတယ်။
ရွှေနှင့်ငွေသတ္တု detectors အ
Radar ရွှေ Detector မထိုးဖောက်မြေပြင် ရွှေ Hunter detectors ရတနာအမဲလိုက်ဘို့ရွှေကို၎င်း Scanner သတ္တု Detector သတင်းအချက်အလက် ရွှေ Detector ကျင်းပလက် သတ္တု detectors အမျိုးအစားများ သတ္တု Detector ငှားရမ်းခြင်း သတ္တု Detector အမဲလိုက်ခြင်း